Dzokai kuna Mwari​—⁠“Mufudzi Nomutariri Wemweya Yenyu” (1 Petro 2:​25)
SARUDZA MUTAURO Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chopi Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kannada Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Munhu anga achirwara anogona kutora nguva asati atanga kuita zvinhu zvaaisiita zvizere. Saizvozvowo, unogona kusimbazve semuKristu kana ukatanga nekudya zvokudya zvine chokuita nekunamata zvishomanana pazuva. Usafunga kuti unofanira kubva wangotanga nekuita zvese. Zvimwe unogona kuita maminitsi mashomanana uchiverenga Bhaibheri kana kuteerera rakarekodhwa, kudzidza rimwe remabhuku edu, kuenda panzvimbo yekubudisira mashoko paIndaneti yejw.org, kana kuona imwe vhidhiyo pajw.org. Uyewo edza kupinda musangano weungano nekukurumidza. Chikuru kupinda zvose, nyengetera kuna Jehovha uchikumbira kuti akubatsire. ‘Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose paari, nokuti iye ane hanya newe.’​—1 Petro 5:7.
“Pandakamborega kuita mabasa ekunamata, ndainzwa ndichinyara zvekutadza kana kunyengetera. Pandakazoshinga kunyengetera, mumwe mukuru wemuungano medu akabva andishanyira. Akandibatsira kuona kuti Jehovha akanga asina kundirasa. Mukuru wacho akandikurudzira kuti nditange nekuverenga Bhaibheri zuva nezuva. Pandakadaro, ndakabva ndawana simba rekuti nditangezve kupinda misangano. Nekufamba kwenguva, ndakatanga kuparidza zvekare. Ndinofara zvikuru kuti Jehovha akaramba achindiitira mwoyo murefu.”​—Eeva.
Iva nechokwadi chekuti vanhu vari muungano vachakutambira nemufaro. Panzvimbo pekukushora kana kukupa mhosva, vacharatidza kuti vanokuda uye vachaedza zvese zvavanogona kuti vakukurudzire.​—VaHebheru 10:24, 25.
“Ndainyara kuenda kuImba yoUmambo. Ndainetseka kuti hama dzechiKristu dzaizondibata sei. Imwe hanzvadzi yedu yakwegura yaiva iri muungano iyi makore 30 akapfuura yakanditi: ‘Titambire mwanangu!’ Mashoko iwayo akandibaya mwoyo. Zvechokwadi kudzoka kuungano kwainge kudzoka kumba.”​—Javier.
“Ndakaenda kuImba yoUmambo ndikagara nechokumashure ndichiitira kuti vanhu vasandizive. Asi vakawanda vakandiziva nokuti ndakanga ndambopinda navo misangano ndichiri mudiki. Vakandigamuchira vachindimbundira noushamwari zvokuti ndakanzwa ndanyatsodekara. Ndaiita semwana akarasika adzoka kumba.”​—Marco.
Vakuru vachakubata zvakanaka. Vachakurumbidza zvikuru kuti uri kuratidza chido chekukuchidzira “rudo rwawaiva narwo pakutanga.” (Zvakazarurwa 2:4) Vachakubatsira nengoni kuti ugadzirise zvawakakanganisa, uye vachazviita “nounyoro.” (VaGaratiya 6:1; Zvirevo 28:13) Vakuru vanogona kuronga kuti mumwe munhu adzidze newe, zvimwe achishandisa mabhuku akadai saSwedera Pedyo naJehovha kana kuti “Rambai Muri Murudo rwaMwari.” Iva nechokwadi chekuti vakuru vachakunyaradza uye kuti vacharamba vachikutsigira.​—Isaya 32:1, 2.
“Kwemakore masere andakanga ndisingaiti mabasa echiKristu, vakuru vaigara vachiedza kundibatsira. Rimwe zuva, mumwe mukuru akandiratidza mapikicha atakambotorwa tese. Mapikicha iwayo akandidzora ndangariro zvokuti ndakatanga kushuva mufaro wandaiwana pandaishumira Jehovha. Vakuru vakandibatsira kuti ndivezve nepurogiramu yekuita zvinhu zvekunamata.”​—Victor.
rj chikamu 5 pp. 12-15
CHIKAMU 4 Kuzvipa Mhosva​—⁠“Ndichenesei Pachivi Changu”